यसरी महामारी बढे हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली थेग्दैन् – डा. पौडेल - Meronews
यसरी महामारी बढे हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली थेग्दैन् – डा. पौडेल
मेरोन्यूज २०७८ वैशाख १५ गते १७:०८
काठमाडौं । यदि कोरोनाको कुनै पनि लक्षण देखिएमा तुरुन्तै कोरोना परीक्षण गरिदिन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आग्रह गरेको छ । अस्पतालमा भर्ना पुगेका ८० प्रतिशतलाई अक्सिजन नचाहिने महाशाखाका प्रमुख डा.कृष्णप्रसाद पौडलले जानकारी दिए ।
कोरोना परीक्षण गर्न स्वाब दिएपछि नमुना परीक्षण रिर्पोट नआउँदासम्म बाहिर नजान उनको सुझाब छ । उनलेभने“पछिल्लो समयमा संक्रमितको संख्या बढ्दा आइसियूको बढ्दो माग छ ।”रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नुभन्दा अघि नै बच्न उनले अनुरोध छ ।
घर बाहिर सकेसम्म नजान र यदि जानै परेमा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न,हात पटक पटक धुन र स्यानिटाईजरको प्रयोग गर्न डा. पौडेलको सुझाब छ । उनले भने,“ प्रयोग गरेका मास्क प्लाष्टिकमा राखेर बाध्न वा बन्द डस्बिनमा राख्न र पाँच दिनमा फोहोरसँग फाल्नुहोला ।”
सबै स्थानिय तहलाई आवश्यक आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न उनले सुझाब दिए । उनले भने,“ महामारी एकदमै बढ्दै गएको छ यसरी बढ्दै गए हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने अवस्था आउँने देखिन्छ । त्यस कारण सबै सचेत बनेर सबै मिलेर लड्नुपर्ने देखिएको छ ।”